PSJTV | आफ्नालाई जागिर खुवाउने काइदा : पद, परीक्षा र हल उही तर प्रश्नपत्र फरक !
आफ्नालाई जागिर खुवाउने काइदा : पद, परीक्षा र हल उही तर प्रश्नपत्र फरक !
काठमाडौं : पद उही। परीक्षा उही। हल उही। तर, प्रश्नपत्र फरक। यस्तो कहाँ हुन्छ ? अन्यत्र नभए पनि नेपाल रेडक्रसमा हुँदो रहेछ। रेडक्रसले परीक्षा लिएर छैटौं तह लेखा अधिकृत नियुक्ति गरेको एक वर्ष हुन लाग्यो।
आफ्ना मान्छे पास गराउन त्यो परीक्षामा भएको बेइमानी भने बल्ल खुलेको छ। त्यसमा उही हलमा बसेका परीक्षार्थीलाई फरक प्रश्नपत्र दिइएको पाइएको छ। एउटा २० अंकको बाहेक अरू प्रश्न भने दुवैमा मिल्छन्। द्वितीय पत्रको नेपाली खण्डको १ नम्बरमा एउटा प्रश्नपत्रमा आन्तरिक लेखा परीक्षणबारे प्रश्न छ। अर्कोमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबारे।
प्रश्न फरक बन्नुको प्रकरण भने गम्भीर छ। छैटौं तहको लेखा र प्रशासनको परीक्षा उही दिन उही समय (२०७५ असार २ गते बिहान ८ बजेदेखि) भएको थियो। प्रशासनको एक प्रतिस्पर्धीलाई लेखा समूहको, त्यो पनि फरक प्रश्न दिइयो। उनको परीक्षा बिग्रियो।
उनलाई षड्यन्त्रपूर्वक असफल गराएर सफल बनाइयो तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जीव थापाकी भतिजी प्रतीक्षा थापालाई। उनी सञ्जीवका कान्छा भाइ राजीवकी छोरी हुन्। राजीव उदयपुरमा रेडक्रस उपशाखाका सभापति छन्। ती परीक्षार्थीलाई प्रशासनकै प्रश्न परेको भए थापाले सम्भवतः पास गर्ने थिइनन्। याे खबर आजकाे अन्नपूर्ण पाेष्टमा छ।
काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको रिक्त पदमा आगामी मंसिर १४ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। शुक्रबार निर्वाचन ...
एक महिनायता मुलुकको पूर्वी क्षेत्रमा डेंगु रोगको प्रकोप बढ्दै गएको छ। सुनसरीको धरानमा डेढ सातादेखि फैलिएको डेंगु नियन्त्रणबाहिर छ। सुनसरीकै इनरुवा र इटहरी हुँदै मोरङको विराटनगर र झापाको दमकसम्म डेंगु फैलिएको पुष्टि ...